दाङमा बाटो खन्दा किन गरियो यस्तो ? – Jaljala Online
मंसिर २७, दाङ । तुलसीपुर उपमहमानगरपालिका वडा नं. ३ सातवास क्षेत्रमा सडक चौडा पार्ने क्रममा झन्डै दुई दर्जन जति खानेपानीका पाइपहरु क्षति विक्षत भएका छन् ।
ती पाईप तुलसीपुर खाने पानी तथा सरसफाई संस्थाका हुन । त्यहाँ सडक विस्तार गर्न गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ४४ बर्षीय कर्णबहादुर बुढाले पैंया खोरेदेखि सातबास सम्म सडक चौडा पार्ने क्रममा झन्डै २५ देखि ३० वटा खानेपानीका पाइप क्षतविक्षत भएको जानकारी दिए ।
डोजेरले बाटो खन्टा पहाडवाट झरेको ढुंगाले लागेर पाइपहरु क्षतविक्षत भएको उनले जानकारी दिए ।
सडक विस्तारका क्रममा पाइपहरुमा क्षति पुगेको हुँदा पानी वितरणमा समस्या उत्पन्न भइहरेको तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाका एक पदाधिकारीले बताए ।
तुलसीपुर–घोराही सडक खण्ड अन्तरगतको हात्तिखौवा चोकदेखि घोराहीको बबई पुलसम्मको २८ किलोमिटर सडक विस्तार गर्न भन्दै तुलसीपुर ३ को सातबास र राम्रीधाम क्षेत्रवाट इआइए नगरी बाटो चौडापार्ने भन्दै धमाधम ढंगाहरु उत्खनन् गरिदै आइएको छ ।
दाङको एक पसलमा आगलागी
दाङको एक होटेलमा आगलागी हुँदा करिब दुईलाख बढि क्षति भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक बिनोदबिक्रम शाहका अनुसार शुक्रबार राप्ती गाउँपालिका वडा नं. १ बगासोतीमा रहेको होटेलमा आगलागी भएको हो ।
दिउसो १ बजेतिर खड्कबहादुर रावतको छानोको नास्ता पसलमा आगलागी हुँदा अन्नपात, लत्ताकपडा, नगदसहित करिव २ लाख बराबरको क्षति भएको हो ।
होटेलमा आगो ताप्ने क्रममा एक्कासी आगलागी भएको हो । आगलागीलाई स्थानीय र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
दाङमा २७ योजना छनोेट, कहाँ के परे ?
दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २७ योजना छनोट गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य हिराचन्द्र केसी संयोजक रहेको परामर्श समितिले उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोडका विभिन्न २७ वटा योजनाहरु छनोट गरिएको हो ।
जसमा सडक, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटनलाई प्राथमिकता दिईएको छ । जस अनुसार सबैभन्दा बढि बबई गाँउपालिका वडा नं. ४ र ५ को आदर्श नगरमा नहर निर्माणमा ५० लाख,बेदीखोला राप्ती आधारभुत विद्यालयको भवण निर्माणमा ५० लाख,तुलसीपुर १२ मा तारेकुलो निर्माणमा ५० लाख,तुलसीपुर ६ एयरपोर्टबाट पश्चिम तर्फ सडक कालोपत्रे गर्न ५० लाख,तुलसीपुर ३ शिवपुर गहतेखोलामा ट्रष्ट पुल निर्माणमा ५० लाख बजेट छुट्याईएको छ ।
त्यस्तै बबई ५ मा सिमगैरा खयरबट्टी बाटो स्तरोन्तीका लागि २० लाख,बबई २ रामपुरदेखि विजयनेटामा नाला निर्माण २० लाख , बबई ६ र ७ मा पर्ने मोनपुरदेखि ओदाले जोड्ने बाटो स्तरान्नती गर्न १० लाख,बबई ४ मा रहेको सुन्दरखाल चोक देखि गैरीगाउ सडक निर्माणमा १५ लाख,बबई ६ कौसिलापुरमा मन्दिर निर्माणमा १० लाख, बबई ३ मा रहेको हँसपुरमा रहेको धनुवास नहर विस्तारमा १५ लाख, शान्तिनगर १ पेदीखोला बाघखोर तिनुखारा हुदै अखेला जोड्न २५ लाख,शान्तिनगर ३ को पातेटाकुरामा खानेपानी जोड्ने सडक निर्माणमा १० लाख,शान्तिनगर ६ को गिधनिया पिपल चौतारा देखि दक्षिण चिलहरीयामा पक्की कुलो निर्माणमा १५ लाख बजेट छुट्याईएको सचिव वलीले जानकारी दिए ।
सार्बजनिक मालिका–कालिकाले बस सञ्चालन गर्ने
सार्बजनिक मालिका–कालिका यातायात प्रालिले डिलक्स बस सञ्चालन गर्ने भएको छ । अध्यक्ष दिलिप बिकका अनुसार काठमाडौं, धरान, सिम्ला, दिल्लीलगायतका स्थानमा डिलक्स बस सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको बताए ।
अहिलेसम्म अटोरिक्सा सञ्चालन गर्दै आएको उक्त प्रालिले आगामी आईतबारदेखि सेवा शुरु गर्ने बताए । यात्रुहरुको माग अनुसार आफुहरुले सुविधासम्पन्न बस सेवा शुरु गरेको उनको भनाई छ । यसैबीच प्रालिले शुक्रबार एक कार्यक्रमकाबीच नयाँ पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई स्वागत गरेको छ ।
जस अनुसार उपाध्यक्ष नोख बहादुर पुन ‘नोखिराम’, ठूला गाडि सञ्चालन ईञ्चार्ज यसकुमार कुँवर, रुट ईञ्चार्ज जयबहादुर पुन तथा रुट दुर्घटना ईञ्चार्ज किसोर गौतमलाई स्वागत गरिएको हो । कार्यक्रमको सहजीकरण लेखा संयोजक छबि चौधरीले गरेका थिए ।
दाङमा नियमित बर्षाले चिसो बढ्यो
दाङमा नियमितको बर्षादले गर्दा चिसो बढेको छ ।
जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा फिल्ड कार्यालय दाङका अनुसार दाङमा शुक्रबार विहानदेखि दिउसो ४ बजेसम्म ५.८ मिलीमिटर बर्षा भएको छ, भने अधिकतम तापक्रम १६ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । बिहीबार १९ डिग्री सेल्सियस थियो ।
सुदुरपश्चिमबाट आएको बर्षा अहिले पुर्वतिर हुदै देशैभरी फैलिएकोले देशैभर बर्षा भएको मौसम पुर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद बरुण पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार शनिवारबाट मौसममा सुधार आउने छ ।